အဘယ်သူသည်စတော်ဘယ်ရီကောက်နေများအတွက်ဖင်လန်မှာအလုပ်မလုပ်ထံသို့ ဝင်. ??? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်သူသည်စတော်ဘယ်ရီကောက်နေများအတွက်ဖင်လန်မှာအလုပ်မလုပ်ထံသို့ ဝင်. ???
ရာသီဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ပါသည်နှင့်အစောပိုင်းဇူလိုင်လ (ရာသီဥတုပေါ် မူတည်. ) နှင့်ဇူလိုင်လရဲ့အဆုံးမှာအဆုံးသတ်ထားသည်။
ယင်း၏စတော်ဘယ်ရီလယ်ယာကျော်ကြား Suonenjoki နှင့်၎င်း၏ဝန်းကျင်ရှိမြို့: မှည့်သော, မွှေးသီး၏ 650 ဟက်တာ! လူငါးထောင်အကြောင်းကိုနှစ်စဉ်လာရန်လုပ်ကိုင်ဖို့။
(တစ်နေ့လျှင် 7-10 ယူရိုခန့်) နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အစားအသောက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်လစာထဲကနေနုတ်ယူ။
ဝင်ငွေရရှိမှုစတော်ဘယ်ရီစုဆောင်းငွေပမာဏအဖြစ်သီးနှံနှင့်ရာသီပေါ်မူတည်သည်။ အနည်းငယ်သီးမယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သူတို့တဖြည်းဖြည်းစုသိမ်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုပိုပြီးပေးဆောင်ရန်အဘို့အ။ တစ်လထဲမှာကိုသင် 800 ယူရို 1400 ထံမှဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
День на клубничной ферме начинается рано: подъем на рассвете, в шесть ноль-ноль — выход в поле. Смена заканчивается в три часа дня (с обеденным перерывом на час) . Такой режим имеет свои преимущества: ранним утром не так жарко, к тому же остается полдня на отдых! А если еще есть силы, то можно взяться и за другие работы: следом за клубничным идет сезон малины и гороха.
Финляндия. Сбор клубники. На сборе овощей и ягод в общей сложности можно трудиться 2,5-3 месяца. Кроме того, с первых чисел мая до начала сбора клубники — на фермах предлагается работа по посадке овощей и ягод.
ဒီအကြောင်းသစ်တောထုတ်ကုန်များစုဆောင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်, သင်ထားတဲ့အလုပ်ရှင်ငှားရမ်းခြင်းမရှိဘဲ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
စပါးရိတ်ရာကာလဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မြို့ကြီးများနှင့်ကျေးလက်ဒေသ၌ရှိကြ၏ -Item ဧည့်ခံလက္ကားဂိုဒေါင်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာယူပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, တချို့ဒေသများအတွက်ကြီးထွားလာရာသီတှငျအဘယျသီးများနှင့်မှိုတစ်စိတ်ကူးရှိသည်, အဆိပ်မှိုကနေစားသုံးနိုင်သောခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သစ်တောများတွင်ဘယ်သူမှသင်တစ်ဦးအစွန်အဖျားကိုပေးမည်: အကောင်းဆုံးထိုင်ခုံလျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ဖို့အမှန်တကယ်မှို! ဖင်လန်။ စတော်ဘယ်ရီ။
အထူးသဖြင့်သီးနှံနှစျ, သီးများနှင့်မှိုကောက်နေ, အတော်လေးအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ ဖြန့်ဖြူးစင်တာများသီးကို ယူ. ရသောမှာစျေးနှုန်း, (ထိုစုဆောင်းသီးများနှင့်ရာသီ၏အရည်အသွေးပေါ် မူတည်. ) နေ့စဉ်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးကြီး cloudberries: လက္ကားကီလိုသူမ၏ 6-7 ယူရိုကိုဝယ်ကြလော့။ Cranberries နှင့် blueberries ကီလို 1,5-3,5 ယူရိုအပေါ်ယူနိုင်ပါသည်။
В Центральной и Восточной Финляндии собирают в основном чернику и бруснику, в Лапландии и Северо-Западной Финляндии — морошку. Из грибов самый востребованный — это белый гриб. Его принимают очищенным по цене от3до7еиго за килограмм.
ဖင်လန်မှာအလုပ်မလုပ်ဖို့သီးနှင့်နေထိုင်ရာအရပ်ဌာန (ကဗီဇာရယူဘို့မဖြစ်မနေခွအေနအေ) ၏စုဆောင်းမှုအပေါ်ရာသီအလိုက်အလုပ်ငှားရမ်း၏အလုပ်ရှင်အတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည်။
Дополнительная информация о визах — в визовом отделе Генерального консульства Финляндии в Петербурге (по будним дням с 10.00 до 12.00 потел. (812)331-7603), в Москве — в визовом отделе при Посольстве Финляндии (потел. (095)247-3125), а также в консульствах в Петрозаводске и Мурманске.
Posted in, ပြည်ပမှာအလုပ်အကိုင်
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,217 စက္ကန့်ကျော် Generate ။